HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mingrelian Mongol Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Indianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
NISY fivoriana lehibe natao tao Jerosalema. Efa antitra i Davida Mpanjaka tamin’izay. Novoriny ny andriana sy ny tandapa ary ny lehilahy mahery rehetra. Faly be ry zareo fa nisy vaovao mahafinaritra be nolazainy. Nasain’i Jehovah hanorina tempoly tsara tarehy hivavahana aminy i Solomona zanany. Efa nomen’i Jehovah an’i Davida ny planin’ilay trano, ary nomeny an’i Solomona ilay izy avy eo. Hoy i Davida: ‘Asa goavana no atao, satria tsy ho an’olombelona ilay lapa fa ho an’i Jehovah Andriamanitra.’—1 Tan. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.
Nanontany i Davida taorian’izay hoe: “Iza no vonona hanao fanomezana an-tsitrapo ho an’i Jehovah anio?” (1 Tan. 29:5) Raha teo ianao tamin’izay, dia inona no mety ho nataonao? Nanohana an’ilay asa ve ianao? Tsy nisalasala nanao an’izany ny Israelita. “Faly” izy ireo “nanao fanatitra an-tsitrapo, satria tamin’ny fony manontolo no nanaovany fanatitra an-tsitrapo ho an’i Jehovah.”—1 Tan. 29:9.
Nanorina tempoly hafa mbola lehibe lavitra noho ilay tempolin’i Solomona i Jehovah, taonjato maro tatỳ aoriana. Tsy inona izany fa ny tempoly ara-panahy, izany hoe ny fandaharana nataony mba hanatonana sy hanompoana azy miorina amin’ny sorona nataon’i Jesosy. (Heb. 9:11, 12) Tian’i Jehovah hihavana aminy ny olona, ka irahiny hanampy azy ireny ho lasa mpianatr’i Jesosy isika. (Mat. 28:19, 20) An-tapitrisany àry isan-taona ny olona mianatra Baiboly ary an’aliny no atao batisa, ka lasa misy fiangonana vaovao an-jatony.
Lasa mitombo ny boky sy gazety mila atao pirinty, ary ny Efitrano Fanjakana mila aorina sy kojakojaina. Mihamaro koa ny toerana fanaovana fivoriambe ilaina. Tena miaiky àry isika fa asa goavana ny mampiely ny vaovao tsara, nefa koa mahafa-po.—Mat. 24:14.
Tia an’i Jehovah sy ny mpiara-belona amintsika isika. Fantatsika koa fa tena maika ny asa fitoriana. “Vonona hanao fanomezana an-tsitrapo ho an’i Jehovah” àry isika. Tena faly isika ‘manome voninahitra an’i Jehovah amin’ireo zava-tsarobidy ananantsika.’ (Ohab. 3:9) Faly koa isika fa ampiasaina tsara mba hamitana an’ilay asa lehibe indrindra ny fanomezana ataontsika.
Maro ny olona ‘manokana vola’ hatao fanomezana, ary mandrotsaka izany ao amin’ny boatin’ny fiangonana misy soratra hoe “Asa Maneran-tany.” (1 Kor. 16:2) Alefan’ny fiangonana any amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah eo an-toerana ireny vola ireny isam-bolana. Azon’ny tsirairay alefa mivantana koa anefa ny fanomezana an-tsitrapo, ka alefa any amin’ny Biraon’ny Mpitahiry Vola, Fikambanan’ny Mpianatra ny Baiboly eto Madagasikara (FI.MPI.BA.MA.), B.P. 116, 105 Ivato. Ireto avy ny karazana fanomezana azonao alefa mivantana:
Vola avy ao amin’ny kaonty amin’ny banky, ary alefa amin’ny alalan’ny Internet na amin’ny alalan’ny karatra fandoavam-bola na amin’ny alalan’ny finday. Azo atao amin’ny alalan’ny jw.org na amin’ny alalan’ny tranonkala hafa efa voafidy koa izany, any amin’ny sampana sasany.
Lelavola, firavaka, na zava-tsarobidy hafa. Ampiaraho amin’ny taratasy milaza hoe fanomezana tsy misy fepetra ilay izy. Antsoina hoe fanomezana tsy misy fepetra ny vola na zavatra omenao, rehefa tsy misy fepetra lazainao momba an’ilay izy.
Azonao atao ny manome vola misy fepetra. Afaka mametraka fepetra ianao, ohatra hoe haverina aminao ilay vola rehefa mangataka izany ianao.
Trano sy tany: Azo atao fanomezana tsy misy fepetra ny trano sy tany azo amidy. Azo atao fanomezana misy fepetra koa anefa izany, ohatra hoe mbola ho fanananao ilay izy izao, na mbola tianao hipetrahana, fa rehefa maty ianao vao lasan’ny FI.MPI.BA.MA. ilay izy. Mifandraisa amin’ny biraon’ny sampana, alohan’ny hamindrana trano sy tany ho amin’ny anaran’ny FI.MPI.BA.MA.
Didim-pananana sy fanankinam-pananana: Azo ampandovaina fananana na vola ny FI.MPI.BA.MA., nefa tokony hisy didim-pananana ara-dalàna hatao mba hampanan-kery an’ilay izy. Misy koa mahazo tombony amin’ny taniny na ny fananany hafa ankininy amin’ny olona na orinasa, ary tiany ny hizara ilay tombony amin’ny FI.MPI.BA.MA.
Tokony hosoratany mazava tsara ao amin’ny fifanarahana ifanaovany amin’ilay olona na orinasa anefa izany. Mety hihena ny hetra aloanao, rehefa manasoa fikambanana ara-pivavahana ianao.
Raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia midira ao amin’ny jw.org/mg, dia jereo ilay hoe “Mandrotsaha Fanomezana ho An’ny Asanay Maneran-tany” eo amin’ny farany ambany amin’ny pejy fandraisana. Azonao atao koa ny manoratra na miantso any amin’ny biraon’ny sampana.